Xisbiga CC Shakur oo war-saxaafadeed ka soo saaray shirka London (4-qodob) ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Xisbiga CC Shakur oo war-saxaafadeed ka soo saaray shirka London (4-qodob)
Xisbiga CC Shakur oo war-saxaafadeed ka soo saaray shirka London (4-qodob)
Xisbiga Wadajir oo uu hogaamiyo siyaasiniga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa wax-saxaafadeed afar qodob ka kooban wuxuu ka soo saaray shirka shidaalka Soomaaliya ee lagu wado in uu magaalada London ee xarunta wadanka Britian.
Wuxuuna xisbiga sheegay in uu walaac badan ka qabo shirkaan lagu xaraashayo shidaalka Soomaaliya, oo ay Dawlada Federaalka shirkadaha ajnabiga ah kula heshiin rabto.
Hoos ka Akhriso war-saxaafadeedka uu soo saaray Xisbiga Wadajir ee uu hogaamiyo siyaasi Warsame.
Xisbiga Wadajir wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa kulan ay soo abaabuleen xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Shirkada (Spectrum) oo 07 Febraayo 2019 lagu qabanayo magaalada London, kaa soo lagu beecinayo xirmooyin 50 (Blocks) oo shidaalka Soomaaliya ka mid ah oo ku teetsan dhul ku fadhiya 173,000 km.
Xaraashka (Auction) xirmooyinka shidaalka ayaa la qabanayaa iyadoon hal qodob laga taabagelin heshiiskii ay 05 Juun 2018 magaalada Baydhabo ku gaareen Dawlada dhexe iyo dawlad Goboleedyada. Heshiiska Lahaanshaha maamulka iyo wadaaga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka (Shidaalka iyo Macdanta) ayaa dhigaya:
1) – In sharciga Shidaalka iyo Macdanta laga ansixiyo 2-da aqal ee Baarlamaanka Federaalka. Xukuumadu ma ansixin sharcigaa.
2) – In la dhiso Golaha Khayraadka Dalka oo ah Golaha ugu sarreeya ee lagu lafa guro Arrimaha khayraadka ee u baahan in laga heshiiyo, waxaana xubno ka ah madaxda fulinta ee heer Federaal iyo heer dowlad Goboleed.
3) – In la dhiso Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed, taasoo lagu dhisayo sharci gooni u ah waxayna ka shaqayn doontaa wada hadallada heshiisyada, diyaarinta shatiyadda, kormeerka, hubinta iyo hirgelinta sharciyadda Batroolka. Xukuumadu ma dhisin hay’adaas.
4) – In la dhiso Shirkadda Shidaalka Soomaaliyeed (Somali National Oil Company-SONOGRAM) oo ah shirkad ay yeelanayso Dawlada Soomaaliya oo masuul ka noqonaysa sahminta, dhismaha kaabayaasha shidaalka, sifeynta, soo saarida iyo suuq gaynta, rasumaalka iyo wadaaga saamiyada shirkada, taasoo lagu qeexayo sharci gaar ah.
Xukuumadu waxay soo saartay qoraal ay ku sheegayso ujeedka shirka uu yahay xog wadaag, laakiin waxaan tuhun ka qabnaa qoraalka shirkada (Spectrum) ee cadaynaya in ujeedku yahay iibinta xirmooyin shidaal, maadaama uu shirkii soo bandhigida xogta shidaalka Soomalaiya horay loogu qabtay wadanka Koonfurta Afrika.
Waxaan xukuumada ugu baaqaynaa in ay shirkaas joojiso. Hawlaha sidaan xasaasiga u ah waxay u baahan yihiin wadatashi iyo aragti midaysan oo xooggaga siyaasadeed isla meel dhigaan. Ma aha hawl ay xukuumadu kaligeed go’aansan karto, maadaama ay waxa miiska saarani ay yihiin hanti Qaran.
Haddaba, waxaan uga digaynaa shirkadaha loogu yeeray shirka in ay ku kadsoomaan iibsiga xirmooyinka (Blocks) shidaal ee ay xukuumada soo bandhigayso. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay ka soo qaybgalaan mudaaharaad ka looga soo horjeedo iibinta xirmooyinka shidaalka Soomaaliya si ay u ilaashadaan khayraadka dalkooda, kagana hortagaan xaraashka shidaalka iyo Macdanta dhulkooda.
Previous articleDaawo:- Maxaabiis qaab farsameysan uga baxsaday Xabsi
Next articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo kulan la yeeshay madaxweyne Lafta Gareen